जिन्दगीले पनि अनौठो खेल खेलिरहेछ । उसले मलाई सदैव साथ दिन्छे तर म भने संसारिक मायामा फसेर उसको मायालाई बेवास्ता गरिरहेछु । यसोभन्दा त मोरी खुब हाँसी त ! म त नदेखेको र नसुनेको जस्तै गर्छु । ए कहाँ हुनु र, ऊ त एकोहोरो हेरिरहेकिरहिछ । न त ऊ हाँसेकिरहिछ न त बोलेकी । तर उसले मलाई सदैव प्रेरणा दिइरहेकी छे । ऊ केही बोल्न खोज्दैछे तर कसैबाट बन्देज गरिएकी हुनुपर्छ बोल्न सकिरहेकी छैन ।
सायद ऊ मलाई अत्यन्त चाहन्छे तर म भने आफ्नै पिर, आफ्नै व्यथा र विगत सम्झेर बसिरहेको छु । न त कसैलाई प्रेम गर्न सक्छु न त कसैले आफूंलाई गरेको प्रेमलाई बुझ्न । सायद “नजिकै रहेको तीर्थ हेला“ भएको हुनुपर्छ । कति रात, कति दिन उसले मलाई साथ दिएकी छे । म भने सदैव चिन्तित, निराश भएर उसलाई एक्लो पारिरहेछु ।
अब आशावादी हुनुपर्ने भयो, तिमीले गरेको प्रेमको कदर हुनुपर्छ । मैले जसलाई प्रेम गरे ऊ त मेरी कहिल्यै नहुने भइन् तर तिम्रो प्रेम सफल हुनेछ । मलाई धेरै माया गर्ने मेरी मायालु “किताब“, अबका दिन तिमीसँग हाँस्दै अविस्मरणीय बनाएर बिताउनेछु । तिम्रो छायामा नै यो जिन्दगी समर्पित गर्छु । अब मेरा रात, मेरा चिन्तन, मेरा विचार अनि मेरा भावना सबै तिमीलाई नै सुनाउँला । तिमीसँगै रमाउँला, यो जिन्दगी अब तिमीलाई समर्पण गरुला । प्रेमले मानिसलाई परिवर्तन गराउँछ भन्थे, साच्चै गराउने रहेछ । तिम्रो प्रेममा शक्ति हुनुपर्छ । मेरी प्यारी किताब अब तिम्रो र मेरो प्रेमको चर्चा चल्छ र त्यो दुनियाँ जल्ने छ । मायाले ढुङ्गा त चकनाचुर हुन्छ, जाबो मान्छेको मन र विचार ।
– रोशन यादव
राजविराज नगरपालिका १३, सप्तरी
हाल नयाँ दिल्ली
जन्म : २०५४
(विगत ६ वर्ष देखि नेपाली भाषामा फुटकर रचना लेख्दै आएको । प्रवासमा भए पनि नेपाली साहित्यको बिस्तार र प्रवद्र्धनको लागि हातेमालो नेपाली विद्यार्थी समूहको माध्यमबाट थुप्रै साहित्यिक गोष्ठी साथै नेपाली साहित्यको संकलन गरेर वार्षिक स्मारिका “द भोइस आफ एवरेस्ट“ प्रकाशन गर्दै आएका छन् । उक्त संस्थाका सचिव रहेका यादव पेशाले सी.ए. अध्यनरत हुन् ।)